အဲဒိုခေတ် မီးသတ်သမားတွေရဲ့ အပျံစားဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းများ ！ - JAPO Japanese News
လာ 16 Mar 2020, 16:51 ညနေ
လက်ရှိမှာလည်းပဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သစ်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်တွေ၊ အဆောက်အဦးတွေရှိနေသေးပေမဲ့၊ ရှေးအရင်အချိန်တုန်းကတော့ သစ်တွေကလွဲပြီး တစ်ခြားဆောက်လုပ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။
နောက်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ တိုကျို၊ အရင်ကတော့ အဲဒိုလို့ခေါ်တဲ့ မြို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ သစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေ သိပ်သည်းစွာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒိုဟာ ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင် တိုက်လာတဲ့လေတွေကလည်း အတော်လေးကိုခြောက်သွေ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ မီးလောင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့နေရာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပြီး၊ တစ်မြို့လုံး ပြာကျလုနီးပါးကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုမျိုး အဲဒိုမြို့ကို ကယ်ဆယ်ကာကွယ်နေတာကတော့ မီးသတ်သမား သူတို့ပါပဲ…..
Fire and fighting are the flowers of Edo
မီးလောက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ လူတွေကစုလာကြပြီး အုပ်အုပ်ကြပ်ကြပ် ဆူဆူညံညံတွေ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှာ သူရဲကောင်းကြီးတွေကို အားကျသဘောကျ ကြတဲ့အလေ့အဓက အဲ့ဒိုမြို့မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
မီးသတ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်က အရမ်းကိုရဲရင့်ပြီး လေးစားအားကျရတဲ့ အလုပ်လိုကို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ဝတ်စုံမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေရှိကြပါတယ်တဲ့..
မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ လူအုပ်ကြီးကြားမှာ ရောက်လာပြီး၊ မိမိကိုယ်ပေါ် ရေလောင်းချလိုက်ပြီး ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကို ကယ်ထုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အဝတ်အစားက လူတွေသူတို့ကို ကရုပြုလာဖို့အတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ အမိုက်စားဒီဇိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အခြေခံကတော့၊ အဲ့ဒီအင်္ကျီက ၂ ဖက်လှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပမာ မီးလောက်မှုတို့လို အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်တော့ အပြောင်အလဲ့တွေရှိတဲ့ဘက်ကို အပေါ်မှာထားဝတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ပုံစံကတော့ ဒီလိုပဲပေါ့……..
ဓါးမြနဲ့ ဖားပြုပ် ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးပေါ့။
ဒါကတော့源頼光（みなもとの　よりみつ）Minamoto Yorimitsu လို့ခေါ်တဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် လူသားတွေရဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ ကြီးမားတဲ့ပင့်ကူကို ဖယ်ရှားတဲ့ ပုံပြင်ထဲကပါ။
ကြည့်ရတာ အရမ်းမိုက်တယ်နော် !!!
မီးလောင်မှုကြောင့် အားလုံးကကြောက်လန့်နေကြချိန်မှာ ဒီလိုအမိုက်စားပုံစံနဲ့ အားလုံးရဲ့ ရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ဖြေရှင်းပေးတယ်ပေါ့။
တကယ်လည်း သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေက (ရဲရင့်လား မရဲရင့်လား အပထား) သူတို့ရဲ့ ထည်ဝါတဲ့ ဝတ်စုံကြီးကြောင့် စိတ်ကတော့ တစ်ဝက်လောက်အထိ သက်သာသွားပါတယ်တဲ့….. (ရယ်လျက်)
စကားမစပ် အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ မီးငြိမ်းပုံ ငြိမ်းနည်းကို စာဖတ်သူတို့ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးပါမယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်အဲဒိုအချိန်မှာတုန်းက ရေပြတ်လက်မှုတွေမကြာခဏတွေ့ကြုံရပြီး၊ အခုလို မီးသတ်ကားဆိုတာကလည်း မပေါ်သေးပါဘူး။ ရေနဲ့ပတ်တော့ပတ်ပါရဲ့ ,, သို့ပေမဲ့ ရေနည်းနည်းလေးနဲ့က ဘယ်လိုမှ ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အဲ့ဒီအချိန် မီးငြိမ်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ “ ဖျတ်ဆီးခြင်း ” ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မီးက ဘေးကိုမကူးစက်သွားခင် ဘေးမှာရှိနေတဲ့ အိမ်တွေကိုဖျတ်ဆီးပစ်လိုက်ပြီး၊ ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို မီးတွေဘေးကိုကူးလာပြီးဆိုတာနဲ့ အိမ်ကိုဖြိုချဖျတ်ဆီးလိုက်ရပါတော့တယ်တဲ့….. မတတ်နိုင်ဘူးနော်….
ဒီလိုနည်းနဲ့တောင် မတားဆီးလိုက်နိုင်တဲ့အခါတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက်၊ ကူးလာပြီဆိုရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ငြိမ်းသွားဖို့၊
အဲဒိုခေတ်မှာဆိုရင် မြို့ကို အကွက်ကြီးကြီး တစ်ကွက်စီတစ်ကွက်စီ သတ်မှတ်ပြီး ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပိုင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ ရေနုတ်မြောင်းတွေလုပ်ပစ်လိုက်တာပါပဲ….။
အကြောင်းကတော့ မြို့တစ်ကွက်ကိုမီးလောင်ပြီးဆိုရင် နောက်တစ်ကွက်ကူးဖို့ အလယ်မှာ ရေနုတ်မြောင်းကခံနေတဲ့အတွက် ဆက်ပြီးမကူးနိုင်တော့ဘူးပေါ့… ဥာဏ်ကောင်းတယ်နော် !!!!
အခုအထိလည်း အိမ်ရှေ့မှာတို့၊ အိမ်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ မြောင်းတွေလုပ်ထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ငါးလေးတွေတောင် မွေးထားပါသေးတယ်…
ဒီလိုမီးလောင်မှုကြီးကို တမင်တကာဖြစ်ပွားစေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကျူးလွန်သူကို အမြင့်ဆုံးပစ်ဒဏ်အနေနဲ့ သေဒဏ်အထိတောင် ပေးပါတယ်တဲ့….
အသက်တွေကိုကယ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမ်းလေးစား ဂုဏ်ယူကြပြီး၊ ဘယ်လိုအန္တရာယ်နဲ့ပဲကြုံကြုံ အရမ်းကိုအားကျဖွယ် လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အခုခေတ်စကားနဲ့သာဆိုရင် ယောကျ်ားဆန်တယ်၊ ခပ်မိုက်မိုက်အစ်ကိုကြီး ဆိုတာမျိုးပေါ့……
အသေအချာပါပဲ….. ယောက်ျားပီသပြီး အရမ်းကိုရဲရင့်တဲ့ အမျိုးသားတွေက အဲဒိုခေတ်မှာရှိနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ…!!!